नेपालमा ठूलो बैंकको आवश्यकता छ, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक मर्जर हुन्छ - Aathikbazarnews.com नेपालमा ठूलो बैंकको आवश्यकता छ, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक मर्जर हुन्छ -
ज्योति प्रकाश पाण्डे चिनाई राख्नुपर्ने नाम होइन । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा करिब तीन दर्शक विताएका पाण्डे नेपालकै ठूलो बैंक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । अहिले कजारमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीच बिग मर्जरको कुरा छ । यस सम्बन्धमा के प्रगति भयो । मर्जरको आवश्यकता किन ? मर्जरपछि तपाईको पोजिसन के हो ? यी आदि विषयमा आर्थिक बजार न्यूज डटकमका सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले सीइओ पाण्डेसंग गरेको कुराकानीका केही अंशः
पद र प्रतिष्ठ भन्ने कुरा समयले दिने हो । देशकै ठूलो वाणिज्य बैंक बनाउने कुरामा पदको बारे सोच्नु गलत होला । म दोस्रो मेन भएन बस्ने कि नबस्ने मेरो कुरा होला । तर मर्जर भाँड्ने, नभएका कुराको प्रचार प्रसार गर्नु चाहि राम्रो पक्ष पक्कै होइन भूपेन्द्र जी ।
बैंकले नाफा कमाउने कर्जा नै दिने हो । हामीले कर्जा दिएका छौं । पर्साको कोइला आर्यात कम्पनीलाई नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लगायत केही बैंकले कर्जा दिएको सत्य हो । कर्जा डिफल्ट भयो १०० प्रतिशत प्रभिजन भएको छ केहि पैसा उठेको छ, सम्पत्ती विक्री हुने प्रक्रियामा छ सबै पैसा उठ्ने छ । त्यो अब बैंकहरुको नाफामा जान्छ । त्यसकारण अत्तिनु पर्ने कारण छैन भूपेन्द्रजी । अर्को चितवन मेडिकल कलेजको कुरा के छ भने कर्जा दिएको हो किस्ता आएको छ प्रभिजनिङ्ग गर्नुपर्ने अवस्था आजको दिनसम्म छैन ।
मैले अगाडी नै भनिसके नेपालमा अब ठूलो वाणिज्य बैंकको आवश्यकता भैसकेको छ । मर्जर केही महिना भित्र हुन्छ । ठूलो बैंक पनि हुनछ । काम भइरहेको छ । कसैलाई मर्जर नहोस् भन्ने पनि होला । तर, समयको आश्यकताले नै मर्जर गराउने हो । हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक नेपालकै ठूलो वाणिज्य बैंक् बन्ने कुरामा अब चाहि दुई मत छैन । सचेत भया ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ल्यायो भर्चुअल कार्डमार्फत विदेशमा इकमर्स भुक्तानी सुविधा, ३५ % छुट
एलआईसी नेपालको बीमाशुल्क १० अर्ब ..?
अब कुलमान, हितेन्द्रलाई राजीनामा गर्न आग्रह